Iva nechikoro chebhaibheri chakanyorwa nehunyanzvi neanogadzira papernerds
Ita kuti basa reprojekiti rinyorwe
Kushanda pamwe chete kwakashatirisa zuro! Ngatigadzirirei yako yakaoma chirongwa uye neboka basa Isu tinobatsira nekutsvaga, madhairekitori, zvemukati, mharidzo kana kupa yakakwana package.
Basa rerojekiti - nyora iwe	kana	rega kunyora
Basa reprojekti panguva yedhigiri rinofanira kuitwa nenzira dzakasiyana siyana. Iko hakuna chaiwo madhisheni ebasa reprojekiti. Iyi fomu yebasa repamba inoisa zvinodiwa zvakanyanya kuvadzidzi. Kune rimwe divi, ndezvekushanda muchikwata. Kune rimwe divi, basa reprojekti rinoratidza kuti vadzidzi vakadzidza kuisa dzidziso dzekudzidzira mukuita. Basa rakazvimirira rinodiwa uye sainzi inoendeswa muchikwata. Basa reprojekti rinoitwa pamatanho akasiyana akasiyana. Mukupesana nebasa rechokwadi repamba, fungidziro dzakasiyana uye mhinduro dzinogona kutaurwa muchikwata. Mukukurukurirana, saka, zvinhu zvitsva zvinotorwa mukufungisisa izvo zvingangodaro zvisina kutarisirwa seboka-rakazvimirira basa. Izvi zvinoita kuti basa re projekiti rinyanye kunakidza kune wese munhu anobatanidzwa, asi zvinoda chikamu chakanaka chekubatana kubva kunhengo dzechikwata. Kubatira pamwe ibasa rekushandira pamwe kwete kuitiswa kwako wega mazano kupokana nekupokana kwese muchikwata.
Nekudaro, kugona kushanda muchikwata hazvireve kuzviisa pasi kune vamwe nhengo dzechikwata. Chikwata chinogarawo kubva mukukonana uye kushoropodzwa. Kutaurirana mukati mechikwata nekudaro chinhu chakakosha kwazvo. Kutaurirana kunoreva kuchinjana kwemashoko nezviratidzo. Nekudaro, kutaurirana kwakanyanya kudarika izwi rinotaurwa. Iko kugona uye kugona kutaura kuburikidza nemutauro ndiko kunosiyanisa munhu kubva kune vese vapenyu pasi pano. Mhuka dzinewo mukana wekutaurirana. Asi izvi zvinonyanya kuitika munzvimbo isiri yemashoko. Kutaurirana kunopfuura mutauro chete. Iyo yakafararira ndima yeasinga-matauriro mikana anosanganisira mitezo, matauriro ezwi, uye kutaridzika paunenge uchitaura. Muchokwadi, kutaurirana nemuromo kunongova 10% yezvatinonyatsoona. Ruzhinji rweruzivo runoburitswa zvisiri zvekutaura. Kutaurirana sainzi yakwezvera kutarisa kune iyo gradation iyo iyo ruzivo inochengetwa mundangariro yedu: Chete gumi muzana yezvinoverengwa zvinoitwa mundangariro. Anokwana makumi maviri kubva muzana ehurukuro inochengetwa. Ruzivo rwakawanda - 10% yasara - inoziviswa kuburikidza nemasaini asiri emashoko.
Sekureva kwaLencioni, Iyo Mashanu Dysfunctions yeChikwata (2002), pane zvinhu zvishanu zvakakosha izvo zvisinganyatso kubatsira kushanda muchikwata.
Zvakare, pane maitiro anoratidzira kubatana. Nhengo dzechikwata dzinofarira zvikuru mhedzisiro inogona kuwanikwa mune imwe nguva. Basa riri muchikwata uye rechikwata rinoisa zvido zvemunhu kumashure. Mubatanidzwa unoguma unogara uchitungamira kune yakanaka mhinduro. Kubudirira kwechikwata kunouya pakutanga. Iko kusangana kwekuvandudza kwesainzi mhinduro kunoguma kubva mukuregerera kwemaonero akasiyana.
Rega basa rako rinyore
Unyanzvi hwehunyanzvi nebasa reprojekti
Kunge chero rimwe basa resainzi, basa re projekiti rinosanganisira yakawanda yekutsvagisa mabhuku uye kunyora pasi kwe (zvishoma) mhedzisiro. Munguva yezvidzidzo zvako iwe haufanire kungotarisana nebasa razvino reprojekti. Iwe unofanirwa kugadzirira bvunzo uye rimwe basa rechikoro panguva imwe chete. Uri kupererwa nenguva kuti usatomboona mukana wechokwadi wekunyora chairo basa rebasa munguva yakapihwa. Mune ino kesi, iwe unofanirwa kutsvaga kubatsirwa neyedu ghostwriting agency. Vanyori vedu vanobva kunzvimbo dzese dzedzidzo nemadhigirii eyunivhesiti anoenderana. Naizvozvo, harisi dambudziko hombe kwatiri kutarisa munyori akakukodzera nebasa rako.
Kugovera basa rako reprojekti kune mumwe wevanyori vedu saka chiitiko chepamutemo. Iwe unobatanidza ghostwriter muchirongwa chako. Shanduko ine hupenyu pakati pako nesu kana munyori wedu ichakupa zvimiro zvitsva zvaunogona kukurukura mukukurukurirana kwechikwata.
Izvo zvakanyorwa zvinyorwa zvechikamu chako muprojekti ndiyo hwaro hwekuongorora kunotevera. Saka zvakakosha zvikuru kuti uwane giredhi rekupedzisira rakanaka pano. Kuteerana nezvinodiwa zvesainzi basa kunovimbiswa nebasa redu. Pamberi pekupedzisira chakanyorwa mhedzisiro yechikamu chako chebasa reprojekiti hachina kutumirwa kwauri, basa rinopfuura nematanho akasiyana ehunhu manejimendi mukambani yedu. Izvi zvinosanganisira kubiridzira cheki, kunoitwa mumatanho matatu. Chikamu chekutanga kuongorora kwebasa ne software yekunyepera, sezvo iri kushandiswa parizvino kumayunivhesiti uye makoreji. Isu tinoshandisa akati wandei akazvimirira software masystem. Kana paine chirevo chekubiridzira, munyori chipoko anozoziviswa pamwe nechikumbiro chekuchinja zvikamu zvinoenderana nerugwaro.
Nhanho yechipiri inosanganisira kuongororwa nemaneja wehunhu hwedu. Cheki inoitwa nemawoko nekutarisa mameseji ezvinyorwa paInternet.
Nhanho yechitatu ndeyekutarisa kuti rugwaro rwakarurama here. Zvese zvirevo zvinotariswa kumusoro uye zvakaongororwa kuti zvive nemazvo.
Basa rinozoongororwa kuti riite nemirau yakatarwa here. Iyo yekugadzirisa inosanganisira kugadzirisa chinyorwa
Kupindirana kwemazwi akafanana kudzivisa kudzokorora kweshoko
chimiro chine musoro chebasa uye
kutarisa kururama kwezvirevo zvakataurwa.
Nyanzvi yekugadzirisa ichashandura zvinyorwa zvako zvesayenzi kuva yekutanga-kirasi.
"Ndingadai ndisina kushuvira basa riri nani repurojekiti!"
Bachelor muCultural Zvidzidzo
Yako yekutumira nguva yekupedzisira yave pedyo, iwe uchiri kufanira kudzidza uye kuziva nezve iri kuuya yunivhesiti bvunzo Matambudziko enguva kutadza kuenderera? Iko kuvakwa kwekubatana kunoberekawo michero mishoma uye kunobva kwave chiitiko chinoshungurudza.
Hapana dambudziko, isu tiri pano kuzobatsira! Nesu unowana rubatsiro rwehunyanzvi kubva kune ane ruzivo uye anokwanisa ghostwriter, zvisinei nemusoro wenyaya! Vanyori vedu vezvipoko vane muongororwo wakazara uye up-to-date wezvinyorwa mumunda wavo, vanoziva kwazvo mazwi akakodzera uye vanoziva mashandisiro echidzidzo-nzira dzakasarudzika kuti uvandudze yako Basa reprojekiti kupedzisa zvinobudirira. Neboka redu parutivi rwako, unogona kudzidza bvunzo dziri kuuya uye haufanire kunetseka nezve rako basa resainzi Basa reprojekiti ita pasina chero kunetseka kweboka.
Vapepeti vedu nyanzvi dzezvidzidzo muminda yavo uye vanogadzira rako basa resaenzi zvinoenderana nezvaunoda iwe wega.
Kuti uwane rubatsiro
Tumira chikumbiro chemahara izvozvi uye iwe uchagamuchira rako resainzi basa pazuva raunosarudza! Isu tinoshandisa basa rako nenguva.
Gadzira chikumbiro chemahara
Basa rega rega rakasarudzika
Isu tinokupa iwe unovimbiswa rusununguko kubva mukubiridzira uye zvikanganiso kuburikidza neakawanda mhando cheki uye nekudaro kuratidza kuti rako basa iri remhando yepamusoro yemunhu kopi. Hapana kubiridzira, hapana mhedzisiro - nyanzvi ghostwriting.
Kumbira chinhu chakasarudzika
Kutenda kune iyo inokurumidza uye inokwanisa rubatsiro kubva pamapernerds, ini ndakakwanisa kugadzirira zvakanaka. Ndatenda!
Jule H.Chinzvimbo chekudzidzisa
Rutsigiro kubva kuvagadziri vangu vePapernerds.de rwakapa basa rangu repamba magumo Kubata kwacho kwaigara kune hushamwari uye kugona.
Nerubatsiro rwepapernerds zvaive nyore kwazvo kuwana pepa yetemu yeyunivhesiti yangu.
Mila S.ChiGerman semutauro wekunze
Ndatenda nerubatsiro rukuru. Zvinonakidza chaizvo kushanda nevanhu vanoziva zvavari kuita. Inogona kungokurudzirwa!
Felix M. mushonga
Pasina iwe ndingadai ndisina kuita yangu yekupedzisira! Ndatenda. 🙂
Wakawana rubatsiro nekuti ini ndaisakwanisa kuzviita nenguva Murairidzi wangu ainditeerera zvakanyanya uye aibatsirawo muchikamu chekururamisa. Ndatenda, ramba wakadaro.
Maxim A.Basa rezvemagariro
GADZIRA CHIPO CHISINA-KUSUNGIRA izvozvi
Ndokumbira utumire kubvunza kana mirairo mitsva kubva kune vatengi vedu varipo zvakananga kuna maneja wako
Ndakaverenga mazwi nemamiriro (https://papernerds.de/AGBs/) uye kudzivirirwa kwedata ziviso (https://papernerds.de/datenschutzerklarung/) uye ndozvigamuchira.
Yako data ichave nesu zvakavanzika kurapwa! Basa rese rinoitwa zvisina kuzivikanwa. Nekudzvanya pa "Chikumbiro pasina chinosungirwa", ini ndinopa kubvumidza kwangu kugadziriswa kweangu ega data maererano ne Dziviriro yedata.